Global Voices teny Malagasy » Tatitry ny Greenpeace manasongadina ny fitaran’ny fanarian’ireo firenena eorôpeàna ny fakony any Tiorkia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Mey 2021 5:34 GMT 1	 · Mpanoratra Doga Celik Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Tiorkia, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana
Fako mivangongo mirehitra ao Adana, Tiorkia. Sary avy amin'ny tatitry ny Greenpeace.
Nivoaka tamin'ny 17 May, naboraky ny tatitra farany avy amin'ny Greenpeace: “Trashed: Ny fomba fanohizan'ny UK ny fanariany fako plastika any amin'ny ambin'izao tontolo izao ,” fa ao Tiorkia no tena aondran'ny UK ny ankamaroan'ny fakony. Raketin'ilay tatitra ny fomba ahatongavan'ireo fakon'i Angletera any amin'ireo toerana fanariampako miisa folo manodidina an'i Adana, tanàna iray ao amin'ny morontsiraka atsimon'i Tiorkia.
Ny ampahany faharoa ao anatin'ilay tatitra dia mifantoka fotsiny amin'i Tiorkia, amin'ny fanamarihana fa “nitombo avo 18 heny tato anatin'ny 4 taona ireo fanondranana fako plastika ataon'ny UK mankany Tiorkia, 120.000 taonina tamin'ny 2016, lasa 210.000 taonina tamin'ny 2020″. Efa ho 40 isanjato amin'ny fako ao UK no mitontona any Tiorkia no iafaràny .
Ny sasany amin'ireo fako hita ao Tiorkia no somary vao haingana ihany. Hita any amin'ireo toerana fanariampako ao Tiorkia ireo fitaovana nanaovana filitiana ‘antigen’ COVID-19 avy nampiasaina, ankoatra ireo fonosan'entana mitondra marika britanika toy ny  Tesco, Asda, Sainsbury ary Marks & Spencer. Saingy tsy UK irery no firenena eorôpeàna manondrana ny fakony ho any Tiorkia: ny Fiombonambe Eorôpeàna fotsiny dia mandeha 241 fiarabe feno fako plastika mankany Tiorkia isanandro .
Kanefa ny fotodrafitrasa ao Tiorkia dia tsy natao velively hifanaraka amin'ny fanodinana fako; amin'ireo mpikambana ao anatin'ny OCDE, ny azy no ambany indrindra ny tahan'ny fanodinana fako , 12 isanjato.
Nihan Temiz Ataş, mpitarika ny tetikasa fahamaroam-piainana (biodiversity) ao amin'ny Greenpeace Mediterranean nilaza tamin'ny Evening Standard any UK fa “loza mitatao ny fako plastika alefan'ny UK mankany Tiorkia, fa tsy tombony ara-toekarena fanararaotra akory.” Hoy i Ataş, “tsy manao afa-tsy ny mampitombo ireo olana efa misy amin'ny rafitra fanodinana ananan'i Tiorkia ny tsy fahafehezana ny fanafàrana ireo fako plastika.”
Ao Tiorkia, tsy fenitra arahana ireo fomba fanao manaja ny tontolo iainana, toy ny fanariampako voaaramaso ary ny famadihana ho zezika; zavatra mahazatra hatreto ny mamela ny fako eny ankalamanjana na mandoro azy. Miteraka fahalotoan'ny tontolo iainana ireo toerana fanariampako manao tafo lanitra ary mitahiry entona mety hiteraka fipoahana. Heverin'ny  INTERPOL fa tsy ara-dalàna ary loza ho an'ny olombelona ireo afom-pako sy toerana fanariana fako tsy voaaramaso.
Firenena iray hafa voatanisa ao anaty tatitra i Alemaina. Araka ny famintinan'ny Greenpeace, nanondrana fako plastika nilanja 136.000 taonina nankany Tiorkia ity firenena eorôpeàna ity, ary mbola meloka ihany koa tamin'ny nandefasany 16 isanjaton'ireo fako plastikany nankany ampitan-dranomasina na dia taorian'ny nilazàny aza fa fako efa voahodina ireny. Manfred Santen, simista ao amin'ny Greenpeace Germany nilaza  fa:
Tena maharikoriko ny mahita ireo fako plastikantsika mivangongo mirehitra eny amoron'ireo arabe tiorka. Tsy maintsy atsahatsika ny fanariana ny fako plastikantsika any amin'ny firenena hafa. Ny famokarana tafahoatra no ivon'ny olana. Mila mandray ny fifehezana ny fako plastika any aminy ireo governemanta. Tokony ho raràn-dry zareo ny fanondranana fako plastika ary ahenany ny fampiasàna ireo plastika tsy miasa afa-tsy indray mandeha monja. Tokony ho ao Alemaina no raisina an-tànana ny fikarakarana ny fakon'ny Alemàna. Resahan'ny vaovao tato ho ato ny momba ireo kaontenera 140 feno fako plastika avy any amin'ireo tokantrano alemàna mipetraka any amin'ireo seranana tiorka. Tokony handray fepetra hamerina azy ireny avy hatrany ny governemantantsika.
Taorian'ny namoahana ilay tatitra, nesorin'i  Tiorkia tsy ho ao anatin'ny lisitr'ireo polymers’ afarana ireo plastika polythene, fampiasa amin'ireo harona fitondra miantsena, ireo tavoahangy fasiana shampoo, ary karazana fonon'entana marobe hafa. Hita  tany anatin'ireo fako 198.000 taonina tonga vao haingana avy any UK ny Polythene.
Ny 3 Jolay 2021 ilay fanapahankevitra, izay ny ministeran'ny varotra ao Tiorkia no namoaka azy, no hanomboka hihatra. Mba hiantohana ny fampiharana azy, nilaza  ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fampivoarana ny tanàndehibe, Murat Kurum fa “hanao fanarahamaso tsy tapaka ny fadintseranana mba ho fampiharana ilay fandraràna, izay manaraka ny fandraràna ireo fanafarana plastika mifangaro.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/05/30/152848/
 Trashed: Ny fomba fanohizan'ny UK ny fanariany fako plastika any amin'ny ambin'izao tontolo izao: https://www.greenpeace.org.uk/wp-content/uploads/2021/05/EMBARGOED-GPUK-Trashed-report.pdf?_ga=2.119192777.1733993185.1621694089-122089204.1621694089
 mitontona any Tiorkia no iafaràny: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-21/more-than-40-of-eu-waste-exports-end-up-in-turkey-chart
 toy ny : https://bianet.org/english/environment/244196-greenpeace-plastic-waste-from-uk-germany-illegally-dumped-burned-in-turkey
 ambany indrindra ny tahan'ny fanodinana fako: https://www.theguardian.com/environment/2021/may/17/uk-plastics-sent-for-recycling-in-turkey-dumped-and-burned-greenpeace-finds